Ama-Rotary Machines Manufacturers, abahlinzeki - China Rotary Machines Factory
Umshini weK2 Revolution Tattoo Cartridge
Isivinini sokujikeleza seJalimane esingenasisekelo 25x22mm: I-12V 11000rpm Torque: 420g Imininingwane Esheshayo: Uhlobo Oluhlala Njalo: I-Tattoo Gun Material: Uhlobo Lwe-Alluminium Gun: Indawo Kagesi Yomsuka: Zhejiang, China Igama Lomkhiqizo: Inombolo Yesibonelo K2: MDJ-166 Igama lomkhiqizo: K2 Revolution I-Cartridge Machine Interface: RCA Motor: Germany Coreless Motor 25x22mm Speed: 12V 11000rpm Length Adleable Needle: 0.1-4mm Packing: 1pc / box Weight: 0.6kg Colour: Pink, Black, Gold Advantage: Stable Use for: Tattoo Ngisayala kanjani isampula ...
Umshini weKingKong 3 weTattoo Cartridge
Isivinini se-Rotational Speed ​​saseJalimane: 12V 11000rpm 480 torque enkulu I-AIR FREIGHT: Indlela engcono kakhulu yokuthumela ukuthunyelwa okulingene (ngaphezu kuka-100kg) noma lapho umugqa wakho wesikhathi ungeke ulinde ukuthuthwa kwempahla olwandle. Amanani wezimpahla zomoya asuselwa kusisindo nevolumu. Ezinye izinto ezifana negwebu zithatha isikhala esiningi kepha zilula kakhulu futhi ezinye izinto ezifana nensimbi zisinda kakhulu kepha zithatha isikhala esincane. Izindleko zangempela ezithwala impahla zithatha isisindo nevolumu kokubili ukucatshangelwa. Ngokuvamile, isikhathi sokuhamba asisadluli ku-10 sisebenza d ...
Isivinini se-Coreless Motor Rotational: 9000rpm ubude be-Needle Adjustable: 0 - 3.5mm 1. Imoto engenasisekelo, isivinini se-12/9000 siqinisekisa ukuzinza komshini, amandla aqinile: 2. Ukulimala kwesikhumba okuphansi, umsindo ophansi, umbala osheshayo, awukho umsebenzi oshisayo phakathi! Umzimba wenziwe nge-aluminium yezindiza; icutshungulwa kahle ngethuluzi lomshini we-CNC-axis emihlanu ukuqinisekisa ukuphelela komzimba nokunemba kosayizi! 3. Ubuso be-fuselage bucwebezelisiwe ngesibuko futhi benziwa nge-anodized
Umshini Wokuguqula Umshini We-Hammer (Motorless Core)
Isisindo se-Net: umshini owodwa: isisindo esikhulu se-85g: Usayizi we-170g: Umshini owodwa: 50x52x33mm (kufaka phakathi ubude benduku 91mm) Unhlangothi: Ubuningi bokukhishwa kwenaliti 4mm Ukupakisha: ibhokisi lekhava elingaphezulu neliphansi Umbala: Imibala engu-7 ebomvu-luhlaza okwesibhakabhaka-igolide-isiliva-pink- Uhla lokumiswa okunombala oluhlaza okwesibhakabhaka: oluhlaza okwesibhakabhaka: umshini * 1 induku ye-thimble * 2 iphakethe elincane lokufinyelela * 1 Ongakukhetha: isibambo namapharamitha ocingo: 1. Isikhombimsebenzisi: Isixhumi esibonakalayo se-RCA 2. Izinto: I-Aluminium ingxubevange imoto 5. Ukuqala kwamandla kagesi: 4-5v ...
Umshini We-Alien Tattoo Cartridge (I-Coreless Motor)
Isisindo se-Net: umshini owodwa: isibambo esingu-74g kanye nesibambo: 170g Isisindo esikhulu: umshini owodwa: isibambo esingu-170g kanye nesibambo: 280g Usayizi: Umshini owodwa: 35 * 63 * 110 (ubude bepali) mm kanye nesibambo: 133 * 35mm Usayizi wesibambo: 83.8 * 30.5mm Ukupakisha: ibhokisi lekhava elingenhla naphansi Umbala: Imibala emi-6 emnyama-ebomvu-igolide-nsomi-isiliva mpunga-champagne Uhlu lokumiswa: umshini * 1 induku yokudlulisa * 3 iphakheji encane yokufinyelela * isibambo esingu-1 (okokuzikhethela) Amapharamitha: Isixhumanisi: Isibonisi se-RCA 2. Izinto: I-Aluminium alloy 3. Ubuciko: I-CNC ihlanganiswe ngokunemba kokuqopha 4 ...
Umshini weKingKong 2 Tattoo Cartridge
Isithuthuthu: I-USA Coreless Motor Rotational Speed: 12000rpm Adleable Adlege Length: 0.1 - 4mm DC connector, great conductivity. Ijubane namandla aqinile, esebenza kahle kakhulu. Amandla azinzile, hhayi ukushisa ngemuva kwamahora ayi-8 esebenza. Umsindo ophansi, uhlinzeka ngemvelo ethule yabadwebi bomdwebo namakhasimende. Isebenza kanjani intengo? Lapho u-oda kakhulu intengo ozokwazi ukuyithola. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi kwimikhiqizo ye-OEM / ODM ngoba yenzelwe wena KUPHELA. Konke ukuthuthukiswa, yakhela ...
Umshini Wokujikeleza we-Shell Tattoo
I-Great Quality 9V 12000rpm Tattoo Machine DC Interface Germany I-Faulhaber Motor Shell Tattoo Rotary Machine Incazelo: Lo mshini awunalutho lwamafreyimu e-aluminium alloy akhiqizwayo anomthombo wokukhanya we-LED lapho usebenze futhi ususwa, ushintshashintsha uhlangothi bumpers nekhava yekham. Lo mshini ubuye usebenzise idivaysi entsha yokulawulwa kwe-torsion enelungelo lobunikazi enezinsimbi ezintathu zokuphusha - ezithambile, eziphakathi nendawo nezinzima. Izici ezingeziwe zifaka ukuzwela okungekho polarity futhi akukho ukulibaziseka kokuqala. Umshini une-billet al ...